Vavaka ho amin'ny asa. ? Mitadiava, Makà ary Hantsoina
10 Famakiana Min
Ny vavaka ho an'ny asa Afaka mahazo tombontsoa maro isika.
Ny vavaka dia paikady ara-panahy izay manampy antsika hahita vahaolana amin'ny olana izay matetika tsy fantatsika izay tokony hatao na ny fihetsika.
Amin'ity fehezan-teny manokana ity dia afaka mangataka ny tenantsika isika, mba hahafinaritra ny tontolon'ny asa, mangataha ny tompon'andraikitra na mpanafika antsika ary misy fangatahana hafa miankina amin'ny toe-javatra samihafa mety hitranga ao anatin'izany tontolo iainana izany.
Ny zava-dehibe dia ny fahalalana fa ny olana momba ny asa dia misy ihany koa vavaka azo atao manokana sy mivantana izany, mahatadidy foana fa ny vavaka dia fihetsika tsy maintsy tanterahana amin'ny finoana ny hery nananany.
1 Ny vavaka ho an'ny asa Mahery ve?
1.1 Vavaka mba hahitana asa
1.2 Vavaka hitahy ny asa
1.3 Vavaka hahazoana asa afaka 3 andro
1.4 Mangataka asa maika
1.5 Antsoiko hiantsoana ahy
Ny vavaka ho an'ny asa Mahery ve?
Mahery ny vavaka rehetra. Izany dia ampy ny mivavaka am-pinoana.
Raha manana finoana be ianao ary raha mieritreritra fa mandeha tsara ny zava-drehetra, dia mandeha izy.
Minoa an'Andriamanitra Mitombo amin'ny heriny izy io. Amin'izay ihany ianao no hanome ny zava-drehetra.
Aza mandany andro intsony, manomboka mivavaka dieny izao!
Vavaka mba hahitana asa
Jesosy, Ray any an-danitra mandrakizay:
Ny Raiko, ny torolaliko, ny heriko, miresaka aminao ny Mpamonjiko ...
Manana zanakao eto ianao izay nanota, nefa tia anao ...
Nidera anao noho ny fitiavanao, noho ny hatsaranao mandrakizay sy ny fiarovana nomenao anay, Dada.
Ho anao, azo atao ny zava-drehetra sy izay rehetra azonao atao satria lehibe ny fahasoavanao ary tsy miala amiko velively ianao. Ary amin'ny fotoam-pahoriana dia tsy mba mamela ahy amin'ny tanako akory ianao.
Mofo ianao, ianao dia fiainana, tia sy fiononana ianao. Ao amin'ny haizina no itarihanao ahy. Tonga eo aminao aho, handohalika, ry Dada malalako, miverina indray aho hivavaka ho an'ny hatsaram-ponao mandrakizay, ho fiarovana anao.
Satria fantatro fa avy amin'ny tananao dia tsy hatahotra na inona na inona aho. Satria ianao tompoko tsara fanahy, ampiano ny kivy.
Miangavy anao aho mba hanafaka ny ahiahako, mangataka aho mba ho voavaly ny fangatahako. Manamaivana ny fanaintainako ary tohina.
Ray ô, nitsangana i Jesosy malalako, jereo ny filako ary ampio aho hanohana azy ireo. Miangavy anao amin'ny asa vaovao aho ry Raiko.
Satria fantatro fa tonga lafatra ny drafitrao, satria mahatsiaro tena izy. Tonga aminao aho hanao ny fangatahana ny asako. Mila io asa io aho hamelomako ny ankohonako.
Fantatro fa noho ny hatsaram-ponao lehibe dia tsy hamela ahy hianjera ianao noho ny tananao tsy hatahotra ary hahatsiaro maivamaivana aho. Mangataka aminao aho, Dada, fa homena anao haingana aho.
Isaorana sy ray any an-danitra. Fantatro fa hanokatra varavarana sy varavaran'ny fanantenana ianao. Fantatro fa amin'ny famindram-ponao lehibe dia hahita asa mendrika ho ahy ianao.
Ampio aho, ry Tompoko, hahari-po sy hahazo valisoa. Ataovy izay hananana asa mendrika sy miroborobo ary maharitra. Midira amin'ny fangatahako hanangana ny tenako ara-bola.
Ataovy mpanome aho ary tahio ny fianakaviako, ilay sakafoko.
Miangavy anao amin'izany asa izany aho na hanombohana ilay asako manokana.
(Ataovy mangataha ny fangatahanao manokana)
Ampio aho Tompo amin'ny entako, mifona aminao aho, Tompoko.
Mino ny zava-drehetra aho, ry Andriamanitra ô.
Hotahiny ianao mandrakizay, Tompo!
Ity vavaka mba hitady asa dia tena mahery!
Ny krizy amin'ny asa dia miparitaka any amin'ny tanàna maro eto an-tany. Na izany aza, amin'ity raharaha manokana ity dia misy fehezanteny manokana.
Amin'io lafiny io, ny tena tsara indrindra dia ny manontany mivantana sy am-pahatsorana izay tiantsika ho jerena, inona no asa tadiavintsika hatao ary hangatahina mba hino.
Tsy misy ny vavaka atao amin'ny fo izay mameno ny fanahintsika amin'ny angovo tsara ary io angovo io ihany no itaterantsika na aiza na aiza alehantsika.
Ny vavaka mahery dia afaka manapaka ny rojo tsy mety resy amin'ny herintsika ara-batana.
Vavaka hitahy ny asa
Misaotra anao aho Tompoko, satria afaka miasa aho.
Tsoahy ny asako sy ireo mpiara-miasa amiko.
Omeo anay ny fahasoavana hihaona aminao amin'ny asa isan'andro.
Ampio izahay ho mpanompon'ny hafa. Ampio izahay hanao ny asanay ho mivavaka.
Ampio izahay hahita any am-piasana mety hiteraka tontolo tsaratsara kokoa.
Mpampianatra ô, amin'ny maha-hany afaka mamono ny hetahetantsika amin'ny fahamarinana, omeo anay ny fahasoavana hanafaka antsika amin'ny zava-poana rehetra sy hanetren-tena.
Misaotra anao aho Tompoko, satria afaka miasa aho. Aza avela tsy hanohana ny fianakaviako ary ao amin'ny trano tsirairay dia misy foana izay ilaina mba hiaina amim-pahamendrehana.
Ny vavaka atao amin'ny tanjona fitahiana ny fiainantsika na ny an'ny manodidina antsika dia toa ny fangatahana marina indrindra azo atao.
Rehefa mangataka ny hafa isika dia mampiseho ny fo tsara nomen'Andriamanitra antsika.
Izany no antony hivavahantsika hitso-drano ny asa Tsy vavaka ho an'ny tombotsoantsika fotsiny io fa mahasoa ho an'izay rehetra miara-miasa amintsika.
Amin'ity fehezan-teny ity dia azonao atao ny mangataka amin'ireto toe-javatra iainan'ny tontolon'ny asa entin'ny angovo ratsy sy eritreritra ratsy.
Vavaka hahazoana asa afaka 3 andro
Ry Jesoa malalako, Jesosy malalako, Tompoko, Mpiandry ahy, mpamonjy ahy, Andriamanitro, midera anao aho ho Zanaky ny Ray Mandrakizay, Matoky anao aho ary midera anao noho ny famindram-ponao sy ny hatsaram-ponao, manome voninahitra anao aho satria manome fiarovana ahy sy miaraka aminao Tsy matahotra na inona na inona aho, tiako ianao satria mametraka fahasoavana sy sitraka any an-danitra aho isaky ny miatrika ny alaheloko eo anoloanao aho, isaky ny mangataka fanampiana aminao aho.
Ry Jesoa malalako, Jesosy malalako, Ianao izay jiron'ny Fahazavana Mandrakizay, manitatra ny tananao mpanafa-tanana amiko indray mandeha ary tonga hanampy ahy amin'ny fahoriako; Ianao izay mpirahalahy sy naman'ny sahirana ary aza avelanao ho irery izahay mba tsy hivily lalana, Ianao izay maharitra lalandava aminay dia mamindra fo amiko ary manampy ahy amin'ny fahoriako sy ny hadisoako, mamindrà fo amiko ary afaho amin'ny olako, ary Amin’ny maha mpanelanelana azy manokana eo anatrehan’Andriamanitra sy ny olona dia ataony eo anoloany ny fanatrehako, mba anaovana azy.
Ry Jesosy, ry Jesosy malalako, Jesosy malalako, mijery ity filana lehibe ananako izao: amin'ny fikarohana ataoko no ahitako ny tenako, na dia miezaka aza aho fa tsy mahita izany ary mila maika izany aho satria mila mafy sy mamono fo ny filako, Miangavy anao aho mba hanome ahy ny fanampianao feno fitiavana.
Jesosy, Jesoa tsara lazaiko, Jesosy malalako dia mamoha ny varavarana rehetra izay mihidy mihidy aho, ampio aho hanana asa tsara na orin'asa izay manome ahy fitoniana ara-toekarena ary manome tombotsoa hanatsarana sy handroso, asa na asa mahasoa na asa mahasoa. Afaka mivoatra matihanina sy manokana aho.
Ry Jesoa malalako, Jesosy malalako, Ianao izay mameno fanahy sy vatana milamina dia manafaka ny tsy fahatsapako tsapako ao anatiko, avelao aho hiala amin'ity fotoana ratsy ity ary aza avela hilentika lalina kokoa aho.
Amin'ity ora tsy ampoizinao sy famoizam-po ity dia mitarika ahy amin'ny dingana ataoko, manaova aho hahita tolotra asa tsara, sokafy ny varavarana rehetra ho ahy ary asio olona marina amin'ny alehako izay manohana azy; omeo fahendrena aho hanehoako ny fahaizako sy ny fikirizako ary ny fikirizako fa tsy ho kivy.
Ampio aho hahazo asa tsara izay ahafahako manatontosa ny andraikiko am-pahombiazana ary hahazo ny vola tena ilaina ao an-tranoko, alefaso aho ry Jesoa tsara ho anao mba hahazoako ny zavatra ilaiko:
(lazao amin'ny finoana matanjaka izay tadiavinao)
Ry Jesoa Jesoa malalako, Jesosy malalako, misaotra anao aho hatrany ambany aty fa mahasoa ireo soa rehetra nomenao ahy sy ho an'ireo ho avy izay azoko antoka fa tsy ho very, fantatro daholo ianao ary maniry ny ho any an-danitra mandrakizay aho , izay antenaiko misaotra anao mandrakizay mandrakizay ary tsy hisaraka aminao intsony.
Ka izay ihany. Amen,
Tianao ve ny nivavaka mba hahazoana asa ao anatin'ny 3 andro?
Imbetsaka no ahitanay fa misy asa azo any amin'ny toerana tiantsika hiasa fa azo atao ny tsy afaka miditra amin'izany asa izany.
Amin'izany toe-javatra izany dia tsy misy tsara lavitra noho ny vavaka satria izy no taratasy tsara indrindra amin'ny fampidirana.
Rehefa miditra amin'ny dinidinika asa azontsika atao ny mangataka amin'ilay Andriamanitra mahery mpamorona ny lanitra sy ny tany mba hanome antsika fahasoavana hanao fahatsapana voalohany.
Amin'ny lafiny iray, tsy maintsy manontany foana isika fa indraindray ny zavatra tadiavintsika dia tsy izay tian'ny Tompo ho antsika ary amin'ity lafiny ity dia tokony ho fantatsika fa tsy hanao afa-tsy ny sitrapon'Andriamanitra.
Andeha isika hifindra amin'ny fehezanteny hafa.
Mangataka asa maika
Andriamanitra no mpampiasa lehibe indrindra eto an-tany.
Matoky ny harena be dia be aho ary homeny ahy ny asa tsara indrindra vitany hatreto.
Asa izay hahasambatra ahy.
Hilamina tokoa aho, satria hanana fotoana maro hiakarana. Asa izay mahafinaritra ny tontolon'ny asa.
Asa izay atahoran'ny lehibeko dia matahotra an'Andriamanitra ary manome tontolo mafana sy mangina ho an'ny mpiasa ao aminy.
Noho izany antony izany dia haharitra mandritra izany asa izany aho ary hahatsapa ho faly miasa amin'ny toerana ananan'Andriamanitra entana maro ho ahy, mifanaraka amin'ny zava-drehetra. el tontolo.
Amin'ny fankasitrahana, ho faly foana aho, mizara amin'ny fifaliana rehetra an'ny Tompo, mampianatra mangina miaraka amin'ny fanetren-tena ary miaraka amin'ny ohatra asehoko, ny fikirizana, ny fahatokisana, ny fahatokisana, ny andraikitra ary ny hanome isan'andro isan'andro ny fifaliana lehibe indrindra avy amiko. ka izay ataoko amin'ny fitiavana dia mahasoa ny olona maro.
Amena, misaotra anao Dada fa efa naheno ahy ianao ary vita
Ny fahatongavana any amin'ny toerana izay tsy hitodihinan'ny mpiasa akory sy ny fangatahana asa dia mety ho dingana iray izay mitaky herim-po lehibe satria misy ny fotoana mety handavana antsika nefa tsy mampiseho akory ny fahaizantsika rehetra.
La vavaka hangataka asa Ny maika dia afaka manampy antsika handalo ny fitsapana voalohany momba ny fangatahana asa ho azy fa tsy noho izahay nahita doka.
Amin'ny fotoana mangataka asa dia angatahana fanampiana ara-panahy no angatahana hahalala hoe aiza no alehany, ka Andriamanitra mihitsy no mitarika ny diantsika manomboka amin'ny fotoana hialantsika ao an-trano ary mandra-piverintsika any.
Antsoiko hiantsoana ahy
Ry Ray malala malala, amin'ny anaran'i Jesosy, mitady ny fahendrenao sy ny fahatokisanao aminao aho hitarika ahy hikatsaka ny asa tsara indrindra ho ahy.
Efa te handeha eo ambanin'ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao aho ary tsy miankohoka amin'ny faniriako sy ny fahatakarako ambadika.
Ampio aho hahazo asa tsara izay, amin'ny tanako, tsy misy na inona na inona ho ahy na avy amiko.
Tsy hanahy aho na hanahy ny amin'inona na amin'inona, ry Dada, satria mahatsapa ny fiadananao fa tonga eo amin'ny foko sy ny saiko ny fiadananao.
Ianao no loharanon'ny rano velona, ​​matoky aho fa hikarakara anao ary omenao ahy ny hery hanoherana ny fisondrotana sy ny fady amin'ny fiainako isan'andro.
Misaotra anao aho ry Dada, noho ny nanomezany ny filako asa araka ny harenanao sy ny voninahitry ny Tompontsika.
Andriamanitra ô, enga anie ny herinao hiaraka amiko anio hitady asa. Tariho aho ho amin'izany asa izay tiako sy tiako izany ary manome lanja ahy amin'ny fanahiko rehetra.
Tariho aho ho any amin'ny toerana iray misy rivo-piainana sy fifanajana ao anaty tontolo milamina sy sambatra.
Ampio aho hahita fa ny fifandanjana ara-tsaina sy ara-panahy amin'ity asa vaovao anananao ho ahy ity.Misaotra anao Tompo, noho ny fihainoako ahy sy nanampiany ahy androany.
Tsy mora ny fiainana fa miezaka foana aho hitadidy fa eo foana ianao hanampy ahy amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiainako.
Isaorana anie Tompo, ho isaorana anie ny anaranao Masina Amena.
Amin'izao fotoana izay efa nandao ny antontan-taratasantsika tamina orinasa sasany, dia tsy maintsy miverina miverina miandry ny antso natao isika ao anatin'ny fotoana fohy indrindra, satria ny fitsapana lehibe indrindra an'ity raharaha ity dia ny miandry tsy misy famoizam-po.
Ny faharetana no zava-dehibe amin'ity dingana fiandrasana ity.
Na izany aza, tsy tokony hiandry mandrakizay isika, mangataka ny roa izy ireo hamindra ny sombintsombiny ho tombontsoantsika ka izay antso tsara miandry antsika dia ho avy haingana.
Azonao atao ny milaza ny fehezanteny 5 tsy misy olana.
Ny zava-dehibe dia ny hananana finoana mandritra ny vavaka ho an'ny asa. Tsy misy zavatra hafa rehetra intsony.